Monday October 02, 2017 - 08:46:47 in Wararka by Super Admin
Munaasabaddii lagu furayay saldhiggawaxaa lagu soo bandhigay ciidamo Turki ah oo ay qeyb ka yihiin arday Soomaaliyeed oo dhowr sano ka hor ka baxay dugsiyada sare ee Xamar. Ardaydan ayaa waxaa waalidiintooda loogu sheekeeyay in ay heleen deeq wax barasho una soo laaban doonaan iyagoo aqoonyahano ah, balse waxaa dalkii dib loogu soo celiyay iyagoo lasoo ciidameeyay oo diyaar u ah iney dano shisheeye u dhintaan sidoo kalana aanan xor u ahayn iney booqdaan eheladooda!.
Arrintan ayaa waxay farriin cad u tahay waalidiinta ay ardaydoodu ka qalin jabin rabto dugsiyada sare eela doonayo in la marsiiyo dariiqii kuwaas la marsiiyay, waxaana jirta xog hoose oo aan helnay oo sheegeysa in lasii kordhin doono ardayda la ciidameynao.
Ra’iisulwasaaraha DF Xassan Cali Kheyrre oo ah mas’uulkii ugu horeeyay ee taga saldhigga uu Turkigu sameystay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay marti qaadka loogu sameeyay dalkiisa, waxaana xusid mudan in aan la tusin qeyb kamid ah saldhigga oo aan la ogeyn ujeedada looga qariyay, sida uu inoo sheegay mid kamid ah saxafiyiintiigoob jooga ahaa.
24 Decembar ee sannadkii 2014-kii, dhaqtar Turki ah ayaa isbitalka digfeer musqul ay ku jirtay ku weeraray gabar Soomaaliyeed oo kalkaaliso ah laguna magacaabo Daahiro Macallin Xassan, waxaana dhacday in muran kadib uu dharbaaxyo ugu jiiday. Haddaba iyadoo taa laga shidaal qaadanayo ayaa waxaa is weydiin mudan, xorriyad intee la eg ayay heli karaan hablaheenalaga shaqaaleysiiyay xerada milatari ee ay joogaan ciidamada Turkiga ee NATO oo la ogsoon yahay iney aad u isticmaalaan khamriga?.
Al Shabaab Oo Weeraro Safballaaran ah ku qaaday Saldhigyo kuyaal degmada Buula Mareer.